ne admin pane 2021-04-13
Maapuro akaomeswa anodzivirira kupatira uye anokuchengetedza wakazara kwenguva refu Dzimwe nzira dzekuchengetedza michero dzinowanzo bvisa michero yemuchero wemuchero. Asi kwete maapuro akaomeswa. Imwe yemabhenefiti emaapuro akaomeswa ndeyekuti inorongedza huwandu hwakawanda hweasina kusungunuka uye isingasvike fiber. Hafu yekapu yedhiri ...
Ndeupi Musiyano? Muchena uye Muchena Peaches
Peach inodakadza, ine muto ndeimwe yemafaro ekupedzisira ezhizha, asi chii chiri nani: chena kana yero? Pfungwa dzakakamurwa mumhuri medu. Vamwe vanofarira mapichisi eyero, vachinongedzera yavo "yakasarudzika peachy kuravira," nepo vamwe vachirumbidza kutapira kwemachena machena. Une zvaunofarira ...
Chii chinonzi Chibereko chakaomeswa?
Muchero wakaomeswa chibereko icho chave nekubvisa ingangoita yese yemvura yemukati kubviswa kuburikidza nenzira dzekuomesa. Chibereko chinodzikira mukati meiyi nzira, ichisiya chidiki, chine simba-chakaomesesa michero yakaomeswa. Izvi zvinosanganisira mango, mapainapple, cranberries, mabhanana nemaapuro. Muchero wakaomeswa unogona kuchengetwa kwenguva yakareba kupfuura ...